अफर लेटर: निबन्ध - tilottamacitynews
तिलोत्तमा सिटी - 2021 Mar 30 05:19 PM Tweet
तिलोत्तमा २०७७ चैत्र १७।
इमेलको अपडेट पर्खदा मेरो बारेमा बोलिदिने मान्छेहरु संझन थालें । केहीदिन अघिमात्र “ए तेरोबारेमा फलानाले मलाइ फोन गरेको थियो, मैले आंखा चिम्लेर लिए हुन्छ भनिदिएं, पहिलो शुभचिन्तकको म्यासेज आयो । आशाको घुटको घुटुक्क निलें । फेरी “ ल अग्रिम शुभकामना”,े दोस्रो शुभचिन्तकको म्यासेज आयो । दोस्रो त झन नराम्रो भन्ने मान्छे नै होइन! यो पल्ट त आशाको ठुलै घुटको घुटुक्याएंं लौ जा त ! घरमा भतिजाको बिहाको रमझम छ, भालुको मन खनिउमाथि भनेझैं आफुभने हिडने दिन बिहान दिएको अन्तरवार्ताको कुरा र आफनो बारेमा बोलिदिने मान्छेले पठाएका आशाका सम्देसहरु सम्झेर ढकमक्क फुलिसकेंछु । मन बिबाहको रमझम छोडेर सुटुक्क नयां ठाउंको नयां अफिस भित्र र बाहिर गर्न थाल्यो । दुइजनाको म्यासेज पछि नै आशाको विरुवामा पात पलाइसकेका थिए । यसैबेला “पहिला मसंग काम गरेको आधारमा राम्रै फिडब्याक दिएको छु, मलाइ तेरो नयां रिजुमी पठाइदे है “ भन्दै तेस्रो शुभचिन्तकको इमेल आयो । अब त झन उफ्रिउं कि नाचौं जस्तो भयो ।
तीनजनालाइ फोन गरे भनेपछि केही राम्रै कुरा सुन्न पाउंछेस होला, बुझिस केटी!! भन्न थाल्यो एकमनले । उत्तिनै बेला धेरै नफुर्की टुंगो नलागुन्जेल? भन्यो अर्को मनले । सतहबाट अलिकति गहिराइमा गएर मनमा कुरा खेल्न थाले । के यिनिहरु मप्रति सिरियस नै हुन त ? शुरुदेखि नै संयोगहरुपनि अचम्मसंग मिलेका थिए । अन्तरवार्ता दिनलाइ मिति तोक्न फोन गरेको दिन थेंक्सगिभिंगकोको विदामा न्युर्योक शहरमा घुमीरहेकी थिएं । ट्र्रेनभित्र सिग्नल काटिएर आएको फोनको घण्टीको आवाजमा न मैले उसले बोलेको बुभें न उसले मैले बोलेको नै । केही नलागेर मैले टे्रनबाट बाहिर निस्केपछि आफु बाहिर भएको म्यासेज पठाउंदा उसले उतिबेलै अन्तरवार्ताको लिनलाइ मिति तोकेर पठाएको थियो । पढदै गएं डिसेम्बर ५ तारिखका बिभिन्न समयका अन्तरवार्ताका समय तालिका रहेछन । परेन फसाद अब !! ५ तारिखमा त नेपाल जाने टिकट छ, कसरी जाने त अन्तरवार्ता दिन ? भुतले खाजा खाने बेला भनेको यही होला । बुढाबुढी म्यासेज पढेर एकछिन मुख हेराहेर गर्यौ । अनुरोध गर्दा अलिकति अगाडि सारिदेला कि ? के भनेकी मात्र थिएं, नभन! पहिलेदेखि नै के बार्गेन गर्नु ? जस्तो हुन्छ त्यस्तै देउ, बुढाको सिधा उत्तर आयो । के भनेर जवाफ पठाउने होला, म एकछिन अलमल्ल परें । यसो एकछिन गमे....यस्ता नाथे अन्तरवार्ता कति भए कति! “अच्छ्उि खाएं बच्छ्उि खाएं झुसे बारुलो” संग के को डर ! यो फेरी अर्कोपल्ट न हो, जेसुकै होस त्यही दिन दिन्छु भनेर तीनवोटामध्ये सबैभन्दा पहिलो ८ः१५ समयलाइ छानेर हुन्छ भनिदिएं ।
नम्रता गुरागाईं (हाल नर्थक्यारोलाइना, अमेरिका)